Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fandaniana nandamoka | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fandaniana nandamoka
Par Les Nouvelles sur 26/08/2019
Moa ve tsy ny sata mifehy ny mpanohitra no tena fototry ny fivoriana tsy ara-potoana niantsona ny mpikambana ao amin’ny antenimiera roa tontan’ny parlemanta ? Tsy tanteraka ny fandaniana an’ilay tolo-dalàna naroson’ny solombavam-bahoaka iray momban’izany. Raha raisina an-tendrony dia ny Antemieran-doholona izay tratra farany teo am-pandinihana an’ilay tolotra nefa tsy nahatapaka hevitra ara-potoana ka nahatonga fanilihana ny fandaniana an’ilay lalàna hiantona eo am-piandrasana fivorina manaraka. Menaka ahoso-bato hoy ny fitenenana, tsy mendrika fa toy ny faniratsirana ny vola-panjakana no sady mandingana an’ilay kabary manambara fitsitsina ny volam-bahoaka.
Araky ny voalaza teo ambony, ny Antemieran-doholona no boka, tratra farany tamin’ny fitazomana teny am-pelatanany an’ilay tolo-dalàna. Raha savasavaina anefa ny fandehan’ny asa hikarohana ny tena marina ahafahana hilaza ny rariny dia tsy afa-bela koa ny Antenimieram-pirenena. Dobo tao Tsimbazaza ilay tolo-dalàna niandry ny sitrapon’ny solombavam-bahoaka izay nampitarozaka ny fanapahan-kevitry ny Antenimieram-pirenena, niankina tamin’izay anefa ny fandefasana an’ilay izy any amin’ny Antemieran-doholona ho dinihana sy ho lanin’ny senatera. Indray andro angamba tsy ampy raha tena misy ny fahavontosana sy fanetre-tena momban’ny adidy mikasika ny fandinihana lalina ny volavola sy tolo-dalàna izay miankina amin’ny fitsaran’ny saina sy ny fanahin’ny tena ny fandaniana sy fanomezana hasina azy ho lalàna manan-kery. Araky ny filazana tonga hatrany ampoto-tsofin’ny be sy ny maro nitentina miliara ny faminavinana ny lany amin’ny fivorina tsy ara-potoana ampiantsona ny parlemanta eo anivon’ny antenimiera roa tonta.
Mifamatotra moa ny fahefana roa eo andaniny ny Fanatanterahana ankilany ny Fanaovana lalàna. Mifandanja ny fahefany, ny sarisary an-tsaina fomba filazany ny Frantsay izany dia mifampitana amin’ny fisarihana sy fifamikirana ifanaovana mifamaly ny volom-bava amban’ny saoka, ny antsika Malagasy kosa dia atao resaka am-pihavanana ka tsy ifampisotomana fa iombonana araky ny filazana hoe «volom-bava anao Rainizanany zarazarao samy hanana». Raha soa moa no vokatra dia iaraha-mizara ny fankasitrahana sy ny dera, sedran’izay raha namoa-tsampona na nanefa ny tsy mety dia iaraha-milanja ny tsiny. Ny filanjana tsiny anefa tsy afa-manarina ny vita, no sady izay tsy nanota no avela itora-bato, na izany aza nohon’ny hasin’ny volam-bahoaka tsy azahona tsiny kosa ny fifampitandremana amin’ny filazana fanantenana ny tsy hiverenana fanindroany ny toy iny.